Orinasa mpamokatra milina fanontam-pirinty matihanina izay mampiditra fikarohana siantifika, fanamboarana, fizarana ary serivisy.
Isika no mpamokatra lehibe amin'ny milina fanontam-pirinty flexographic width.Ankehitriny ny vokatra lehibe indrindra dia ahitana ny CI flexo press, CI flexo press ekonomika, stack flexo press, sy ny sisa.Ny vokatray dia amidy manerana ny firenena ary aondrana any Azia Atsimoatsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika, Eoropa, sns.
Nandritra ny taona maro dia nanantitrantitra hatrany ny politikan'ny "mitodika amin'ny tsena, kalitao toy ny fiainana, ary mivoatra amin'ny alàlan'ny fanavaozana".
Hatramin'ny niorenan'ny orinasanay, dia nanaraka ny fironana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy izahay amin'ny alàlan'ny fikarohana ara-barotra mitohy.Nanangana ekipa fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina izahay mba hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra.Amin'ny fampidirana tsy tapaka ny fitaovana fanodinana sy ny fandraisana mpiasa ara-teknika tena tsara, dia nanatsara ny fahaizan'ny famolavolana tsy miankina, ny famokarana, ny fametrahana ary ny debugging.Ny milinanay dia ankasitrahan'ny mpanjifa noho ny fampandehanana mora, ny fampandehanana tonga lafatra, ny fikojakojana mora, ny serivisy aorian'ny varotra tsara & haingana.
Ankoatr'izay dia miahiahy momba ny serivisy aorian'ny varotra ihany koa izahay.Raisinay ho namana sy mpampianatra ny mpanjifa tsirairay.Mandray soso-kevitra sy torohevitra samihafa izahay ary mino izahay fa ny valin-tenin'ny mpanjifanay dia afaka manome aingam-panahy bebe kokoa ho anay ary mitarika anay ho tsara kokoa.Afaka manome fanohanana an-tserasera, fanohanana ara-teknika video, fanaterana kojakoja mifanentana ary serivisy hafa aorian'ny varotra.
Tantara momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana
Novolavolaina tamim-pahombiazana tamin'ny taona 2008 ny milina fametahana voalohany anay, nomena anarana hoe "CH" ity andiany ity.Ny stricture amin'ity karazana milina fanontam-pirinty vaovao ity dia nafarana ny teknolojia helical gear.Izy io dia nanavao ny firafitry ny familiana mahitsy sy ny firafitry ny familiana rojo.
Tsy nitsahatra nandroso izahay, ary avy eo dia niseho ny milina fanontam-pirinty CJ belt.Nampitombo ny hafainganam-pandehan'ny milina noho ny andian-dahatsoratra "CH".Ankoatr'izay, ny endrika dia manondro ny endrika fanaovan-gazety CI flexo.(Nametraka ny fototry ny fandalinana ny CI flexo press koa izy io.)
Amin'ny alàlan'ny fianarana momba ny milina fanontam-pirinty flexo nandritra ny taona maro, dia namolavola ny teknolojian'ny fiara fehikibo izahay mba hampihenana ny olan'ny ranomainty.Nantsoinay hoe “CJS” ity andiany vaovao ity.Mandra-pahatongan'izany, mba hifanaraka amin'ny karazana akora hafa kokoa hanaovana pirinty, dia nampiasa friction rewind izahay fa tsy rewind afovoany.Ny savaivony ambony indrindra dia 1500mm.
Teo amin'ny fototry ny teknolojia fanontam-pirinty stack flexo matotra, dia namolavola tamim-pahombiazana ny fanaovan-gazety CI flexo izahay tamin'ny 2013. Tsy vitan'ny hoe mandrakotra ny tsy fisian'ny milina fanontam-pirinty stack flexo ihany koa izy io, fa koa ny fandrosoana ny teknolojia efa misy.
Mandany fotoana sy hery be dia be izahay hampitombo ny fahamarinan-toerana sy ny fahombiazan'ny milina.Taorian'izay dia namolavola karazana fanaovan-gazety CI flexo telo izahay izay manana fampisehoana tsara kokoa.
Mitohy ny fanavaozana ny orinasa, ary ny vokatra andrasana amin'ny tsena dia ho hita mandritra io fotoana io.
Hanohy hiasa amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana fitaovana izahay.Hanokatra milina fanontam-pirinty flexographic tsara kokoa izahay eny an-tsena.Ary ny tanjonay dia lasa orinasa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny milina fanontam-pirinty flexo.